Tranonkala « Sompitra » : hanampiana ny tanora ho mpandraharaha | NewsMada
Tranonkala « Sompitra » : hanampiana ny tanora ho mpandraharaha
Par Taratra sur 14/02/2018
Ho fanentanana ny tanora vavy sy lahy hiditra amin’ny fandraharahana, nampahalala ny fisokafan’ny tranonkala « Sompitra » (www.sompitra.mg) ny minisiteran’ny Indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina, omaly. Fiaraha-miasa amin’ny Organisation internationale de la francophonie (OIF) izany fandrisihana ny tanora hiditra amin’ny fandraharahana izany, izay efa vita sonia ny volana novambra 2016. Araka ny fanadihadiana fantatra, ny taona 2014 izay mbola tsy nahita fiovana firy amin’izao fotoana izao, tsy misy afa-tsy 2 % monja ny tanora latsaky 25 taona no miditra amin’ny fandraharahana.
Saika miandry tolotrasa ny betsaka amin’ireo nahavita fianarana. Ny hita manana ny fahaleovantenany eo amin’ny antom-pivelomany aza, toa ireo tsy lasa lavitra indray tamin’ny fianarana nataony. Koa ny tranonkala « Sompitra », fitaovana atao hanome vaovao sy torolalana ny tanora amin’ny fomba fanorenana orinasa. Fantatra amin’izany, ohatra, momba ny famatsiam-bola. Noderain’ny masoivohon’ny OIF, Malik Sarr, aty amin’ny faritra ranomasimbe Indianina izao hevitra izao, hampandrosoana ny fandraharahana. Nosoritan’ny minisitry ny Indostria, Tazafy Armand, fa hita ao amin’io tranonkala « Sompitra » io avokoa ny torolalana rehetra tsara ho fantatra, hitantanana ny tanora vavy sy lahy amin’izay tetikasa heverin’izy ireo hajoro.
Fantatra fa sakana lehibe hatramin’ny ela, ho an’izay hanangana ny tetikasany, ny fahitana famatsiam-bola. Raha ny fanadihadiana navoakan’ny Instat, 27 % amin’ny tanora no nanana fahafahana ara-bola ho an’izay tetikasany, na koa nahita mpanohana azy na nampian’ny fianakaviany. Olana ho an’ny rehetra io tsy fahitana famatsiam-bola io.